यस्ता छन् खर्बुजाका ५ फाइदाहरु – Dcnepal
प्रकाशित : २०७९ जेठ १२ गते १४:००
काठमाडौँ। अहिले बजारमा खर्बुजाको थुप्रो छ । माथिबाट कडा र भित्रबाट रातो देखिने यो तरबूज गुणको खानी हो । यसको सेवनले शरीर हाइड्रेटेड र ताजा रहन्छ। त्यसोभए आज हामी तपाईलाई छाला र स्वास्थ्यको लागि खर्बुजाको फाइदाहरू बारे बताउन चाहन्छौं-
१. गर्मी मौसममा थकित आँखालाई चिसो बनाउन काक्रोको प्रयोग गरे जारी खर्बुजाको प्रयोगले पनि त्यसैगरी काम गर्छ । खर्बुजाका दुई साना स्लाइस लिनुहोस् र आँखामा पाँच देखि दस मिनेटसम्म छोड्नुहोस्। थकित निर्जीव आँखाहरू चम्कन थाल्छन्।
२. खर्बुजाको फेसप्याक छालाका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसका लागि दुई चम्चा खर्बुजाको पल्पमा एक चम्चा दही मिसाएर अनुहारमा लगाउनुहोस्। यो लगाएको १५ मिनेटपछि सादा पानीले धुनुहोस्। तरबूजले तपाईको छालालाई हाइड्रेट गर्छ, जबकि दहीमा पाइने ल्याक्टिक एसिड र इन्जाइमले छालाको मृत कोशिकाहरू हटाउनुका साथै छालालाई मोइस्चराइज गर्छ।
३. आयुर्वेदमा, मूत्रमार्गको रोगमा खर्बुजाको सेवन गर्न सल्लाह दिइएको छ। अर्थात् पिसाबमा जलन वा अवरोध हुने समस्या भएका महिला वा पुरुषका लागि तरबूज रामबाण औषधिभन्दा कम होइन । पूरै खर्बुजाबाट सानो टुक्रा काट्नुहोस्। काटिएको भागमा ३० देखि १०० ग्राम मिश्री भर्नुहोस् र काटिएका टुक्राहरू एकआपसमा जोड्नुहोस्। अब यो खर्बुजालाई रातभर सामान्य तापक्रममा राख्नुहोस्। बिहान उठेर केही दिनसम्म खाली पेटमा सेवन गर्नुहोस् । केही दिनमा पिसाबको समस्याबाट राहत पाउन सक्नु हुनेछ।
४, टाउको दुख्ने समस्यामा पनि खर्बुजाको सेवनले आराम मिल्छ । यसका लागि धेरै काम गर्नु पर्दैन । केवल एक गिलास तरबूजको रस लिनुहोस् र यसमा मिश्री थप्नुहोस्। यसलाई केही दिनसम्म दैनिक सेवन गर्नुहोस्। यसले पुरानो टाउको दुख्ने समस्या निको पार्न मद्दत गर्छ।
५. ज्वरो आउँदा पनि बिरामीलाई बिरामीलाई खान सल्लाह दिइन्छ । आयुर्वेदका अनुसार ज्वरोको समयमा तरबूज खाँदा पाचन प्रणाली ठीक रहन्छ । यसले तातोलाई चिसो मात्रै गर्दैन शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न र पाचन प्रणालीलाई पनि ठीक राख्न मद्दत गर्छ।